ट्याग: विचार जेनरेटर | Martech Zone
ट्याग: विचार जनरेटर
ठीक छ, त्यो शीर्षक थोरै भ्रामक हुन सक्छ। तर यसले तपाईंको ध्यान प्राप्त गर्‍यो र तपाईंलाई पोष्ट गर्न क्लिक गर्‍यो, हैन र? यसलाई लिंकबाइट भनिन्छ। हामी सहायता बिना नै तातो ब्लग पोस्ट शीर्षकको साथ आएका छैनौं ... हामीले पोर्टेंटको सामग्री आइडिया जेनेरेटर प्रयोग गर्‍यौं। पोरन्टका चतुर मानिसहरूले जेनरेटरको लागि कसरी आइडिया देखायो। यो एक उत्तम उपकरण हो जसले लिba्कबेटिंग प्रविधिहरूमा क्यापिटल गर्दछ
हामी के हराइरहेका छौं? वा हामीलाई कसले हराइरहेको छ?
रोबर्ट स्कोबलले सोध्यो, टेक ब्लगरहरू के हराइरहेका छन्? तपाईंको व्यवसाय! पोष्टले मसँग नर्व मारा। रोबर्ट बिल्कुल सही छ! जब म मेरो आरएसएस फिडहरू दैनिक आधारमा पढ्छु, म फेरि उस्तै बकबकबाट थकित छु। माईक्रोसफ्ट र याहू हो! फेरी कुरा गर्दै छौ? के स्टीव जॉब्स अझै एप्पल चलिरहेको छ? जब फेसबुक द्रुत रूपमा बढ्दै जान्छ, के विज्ञापन राजस्व चुस्न जारी रहनेछ? प्रत्येक मेगा-डट-कमका प्रत्येक संस्थापक के गर्दैछन्